Ukusuka kwimodyuli yomtya ukuya kwibhanti yebhetri yeApple Bukela | IPhone iindaba
Ukusuka kumtya weemodyuli ukuya kwibhanti yebhetri yeApple Watch
I-patent entsha ye-Apple iyavela kumnatha obhekisa kwi-Apple Watch strap kunye nokufakwa okunokwenzeka kwebhetri kuyo. Ngaphandle kwamathandabuzo ukwandisa ibhetri yezixhobo yenye yemiceli mngeni emikhulu kwiinkampani namhlanje kwaye iApple ayibaleki kuyo. Kule meko kwaye nanjengoko besilumkisile ngelungelo elilodwa lomenzi wechiza kwimodyuli ebhaliswe ngu-Apple kunye nelungelo elilodwa lomenzi, Akukho mfuneko yokuqinisekisa okwangoku ukuba yinto esiyibonayo kwangoko kwiiwotshi ezikrelekrele zeApple, kodwa kusenokwenzeka ukuba kwixesha elizayo elingekude kakhulu la malungelo awodwa omenzi wechiza ayakwenziwa kwiwotshi yohlobo.
Ngokomgaqo, iibhetri ezincinci ziya kufihlwa kanye ngaphakathi komtya kwaye intlawulo iya kwenziwa ngokungeniswa kwi-Apple Watch njengoko kusenziwa namhlanje kodwa ngaphandle kokushiya umlindo kwisiseko, ukubonelela ngobomi obude kwisixhobo. Ekuphela kwento esinokuthi sibonise gwenxa kule meko kwaye ukusukela AppleInsider Bakwabhekisa kulo mthwalo unokubakho kwi-Apple Wacth, kukuba umthwalo woqheliso unika ubushushu kwaye oku kungasombululwa ngenxa yolawulo lwamandla, ukuvumela ukutshaja kodwa ngaphandle kokutshisa iwotshi.
Ipatent emva kwelungelo elilodwa lomenzi we-Apple ke ngoko iyakwazi ukufumana ukukhetha okuhle ukuba umenzi usebenzisa obu buchwephesha bunelungelo elilodwa lomenzi kwaye le yinto ekuhambeni kwexesha ehlala izisa izibonelelo ngandlela thile. Singathanda ukuyibona iphunyezwa kwiiwotshi zothotho, kodwa le yinto exhomekeke kwinkampani kuphela kwaye kusenokwenzeka ukuba kwixa elizayo iibhetri ziya kuphucula kakhulu kwaye akukho mfuneko yokusebenzisa olu hlobo lwebhanti yebhetri okanye ngokulula ukuba zithengiswa njengesixhobo sabo bafuna ibhetri encinci kwi-Apple Watch yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » Ukusuka kumtya weemodyuli ukuya kwibhanti yebhetri yeApple Watch
I-PDF Pro 2, yasimahla okwexeshana
I-OnePlus kunye neMeizu zizingelwa ngokukhohlisa iziphumo zeBenmarkmark